बचौं ह्रदयाघातबाट – News Portal of Global Nepali
8:14 AM | 1:59 PM
12/11/2016 मा प्रकाशित
लन्डनमा हालै मात्रै ३९ बर्षको कलिलो उमेरमा नै ह्रदयाघातबाट ज्यान गुमाएकी विष्णुकुमारी बुढाथोकीको दुखद मृत्युले नेपाली समुदायको माझ मुटुरोग सम्बन्धि चेतना फैलाउन अरु टड्कारो आवश्यकता महशुस भएको देखिन्छ । हालैका दिनहरुमा यसरी ह्रदयाघातको कारणबाट अकालमा नेपालीहरु मर्ने या पिडित हुने क्रम बढ्दो छ । “मलाई के हुन्छ र ?” भन्ने मनस्थितिलाइ त्यागेर “रोग जुनबेला जसलाई पनि लाग्न सक्छ” भनि स्वास्थ र जीवनशैली सम्बन्धि न्यूनतम ज्ञान राखेर मनन गर्न जरुरी छ । सामान्य रोगको लक्षण बारे थाह नपाउनु या बेवास्ता गर्नु, अस्पताल जान या अरुलाई भन्न संकोच मान्नु जस्ता कुराहरुले जीबन नै जोखिममा रहनसक्छ भन्ने कुरालाई सबैले बुझ्नुपर्छ ।
अझ बेलायत जस्तो निशुल्क स्वास्थ सुबिधा भएको देशमा बस्नेले यसको फाइदा लिइ अकालमा मुटुरोगबाट ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्थाबाट बच्न सबैले सचेत भइ आफ्नो अधिकारको उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । अकस्मात छाति दुखिरहेको र त्यो दुखाइ घाँटी, गर्धन, पाखुरा तिर सरिरहेको, श्वास फेर्न गाह्रो जस्तो भएमा तुरुन्त एम्बुलेन्स बेलाउनु पर्छ । शंकामा नबसी उपलब्ध रहेको निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा बोलाउने या नजिकको अस्पताल सकेको चाडै पुग्नुपर्दछ ।
धेरै मान्छेहरु अस्पताल नै नगई अकालमा हृदयाघातबाट मरेपछि बेलायती सरकार र गैर सरकारी संस्थाहरुले “छाती दुखेको बेवास्ता नगरौ” भनि धेरै नै बिज्ञापन गरि मानिसहरुलाई अस्पतालमा जान उक्साहित गरिरहेका छन् । छाति दुखेको व्यक्तिलाई प्राथमिकताको साथ अस्पतालमा उपचार गरिन्छ ।
अस्पतालमा पहिले पुगेपछि के हुन्छ ?
तपाइँ यदि छाति दुखेर अस्पतालको इमर्जेन्सी कक्षमा पुगेपछि सामान्य दर्ताको प्रक्रिया गरेपछि अस्पताल आउनेको कारण बारे सोधिन्छ । “छाति दुखेर आएको” भनेपछि रातो कार्ड दिइन्छ । केहीबेरमा नै शारीरिक जाँच, रक्तचाप र मुटुको धड्कन नापि इसिजी (इलेक्टोकार्डियोग्राम) गरि दुखाइको लक्षणहरुबारे डाक्टर या नर्सले सोधपुछ गरि जाँचबुझ गर्दछन् । एम्बुलेन्सबाट आएमा सिधै आकस्मिक कक्षको बेडमा राखिन्छ र सोधपुछ जारी गरिन्छ । एम्बुलेन्स भित्र इसिजी गरि एस्पिरिन ट्याब्लेट खान पनि दिन सक्ने हुन्छ ।
परिवारमा मुटुरोगको इतिहास, धुमपान गर्ने बानि, आफ्नो वजन आदि बारे जानाकारी लिइ जोखिमका तत्वहरु जस्तै कोलेस्ट्रोल, मधुमेहको लागि रगत परिक्षण गरी त्यसको मूल्यांकनको जांच गर्दछन् ।
इसिजीले कोरोनरी आर्टरीमा खास परिवर्तनहरू हेर्न र के कस्तो ब्ल्केज छ भनि जान्न डाक्टरलाई मद्दत गर्दछ । यसको साथै छातीको एक्सरे पनि गरिन्छ ।
रगत परीक्षण : ट्रोपोनीन र कार्डिक एन्जाइम टेष्ट
यदि तपाई छाती दुखेर अस्पतालमा जानु भएको छ भने यी परिक्षणहरूले बताउन सक्दछन कि तपाईको मुटुको मांसपेशी नोक्सान भएको छ छैन भनेर । यदि नोक्सान भएको छ भने कति धेरै भएको छ भनेर बताउँदछ ।
ट्रोपोनीन टेष्ट द्वारा प्राय: तपाईलाई हृदयाघात भइरहेको छ छैन भनेर डाक्टरले पत्ता लगाउँने प्रयत्न गर्छन् ।
ट्रोपोनीन भनेको एक किसिमको प्रोटिन हो र यो चाहिँ साधारणतया मुटुको मांसपेशीको कोषहरू भित्र पाइन्छ, तर रगतमा होइन । यदि हृदयाघातद्वारा मुटु नोक्सान भएको छ भने ट्रोपोनीन रगतमा चुहिन्छ, जहाँ यसलाइ १२ घण्टा भित्रमा रगत परीक्षणद्वारा देखिन सकिन्छ । कुनै अस्पतालहरूमा कार्डिक एन्जाइम टेष्टको सट्टामा ट्रोपोनीन टेष्ट गरिन्छ ।
एन्जाइमहरू प्रोटिन हुन, जसले शरीर भित्र तथा मुटुको मांसपेशीको कोषहरू भित्र पनि रासायनिक प्रक्रियाहरुलाई मद्दत गर्दछ । जब हृदयाघात भइरहदा मुटुको मांसपेशी नोक्सान हुन्छ र केही एन्जाइमहरू रगतमा चुहिन्छ ।
यी टेष्टहरुको परिणामले तपाईंलाई कस्तो किसिमको उपचार या अरू परिक्षणहरु गर्नुपर्ने भन्ने डाक्टरलाई निर्णय गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।
इसिजी तथा यी अरु परिक्षणहरु सबै गर्दा सबैकुरा ठिक देखियो भने तपाईलाई डाक्टरले सबै जानाकारी दिई घर पठाउछन् । सबै छाति दुखाइ मुटुसंग सम्बन्धित हुदैन । अपच, ग्यास्ट्रिक, बढी ब्यायाम या मांसपेशीय, चिन्ता, हेमोग्लोबिनको कमि, महिलामा महिनावारी हुदामा आदिले पनि छाती दुख्ने हुन्छ । कुनै पनि छाति दुखाइ बेवास्ता भने गर्नु हुदैन ।
तर , छाति दुखेको या छातीमा असुविधालाई मुटुबाट आएको ठानिन्छ, तब डाक्टर र नर्सहरूलाई हृदयाघात भएको या अस्थिर एन्जाइना भएको भनेर छुट्याउन गाह्रो पर्दछ । अनि डाक्टरले उक्त बिरामीलाइ एक्युट कोरोनरी सिन्ड्रोम भएको भन्न सक्दछन् । सिन्ड्रोम भनेको लक्षणहरू एक साथ हुने र कोरोनरी भनेको कोरोनरी आर्टरीमा हुने भन्ने हो ।
त्यसैले एक्युट कोरोनरी सिन्ड्रोमलाई साधारण भाषामा हृदयाघात या अस्थिर एन्जाइना भनेर बुझिन्छ ।
अस्थिर एन्जाइना भनेको के हो ?
एन्जाइना लक्षणहरू देखिन्छन् जब कोरोनरी आर्टरीहरुमा चिल्लो पदार्थ जम्मा भइ साँघुरो हुन्छ जसले गर्दा मुटुको मांसपेशीमा उपयुक्त मात्रामा रगतको आपूर्ति हुँदैन ।
एन्जाइना ले छाती दुख्ने या छातीमा असजिलो महसुस हुन्छ । स्थिर एन्जाइना भनेको कुनै खास क्रियाकलाप जस्तो व्यायाम या चिन्तामा आउन भविष्यबाणी गर्न सकिन्छ, यसलाई औषधीले नियन्त्रण गरिन्छ । अस्थिर एन्जाइना चाहि एन्जाइना भर्खर पहिलोचोटि विकास भएको अथवा एन्जाइना जुन पहिला स्थिर थियो, तर हालसाल यसको अवस्थामा परिवर्तन हुने हो । उदाहरणको लागि इन्जाइनाको दुखाइ कुनै ठेगान नभएको व्यायाम गर्दा, चिन्ता या त्यसै वसिरहदामा पनि आउन सक्छ । अस्थिर एन्जाइना अचानक हुन सक्छ र यसले एकदम बिरामी बनाएको महसुस गरिन्छ ।
कसले एक्युट कोरोनरी सिन्ड्रोम ल्याउछ ?
हृदयाघात या अस्थिर एन्जाइना यी दुवै पहिला कुनै मुटुको रोग नलागेको मान्छेलाई पनि हुन सक्छ । कसैलाई स्थिर एन्जाइना छ, हप्तौ, महिनौ, वर्षै पछि हुन सक्छ । धेरै कारणहरूमा व्यक्तिको स्थिर इन्जाइनाबाट अस्थिर एन्जाइनाको अवस्था फरक हुन्छ तब हृदयाघात हुन्छ । त्यसैले यदि इन्जाइनाको अवस्था यसरी फरक भएमा डाक्टरकहाँ तुरुन्त जानुपर्दछ र अस्पतालमा केही दिन बस्नुपर्ने हुन सक्छ ।
हृदयाघात दिन, रात जुनसुकै बेलामा पनि हुनसक्छ काम गरिरहेको बेलामा या त्यसै आराम गरेको बेलामा पनि । कहिलेकाहिँ ह्रदयाघात अति शारीरिक क्रियाकलाप जुन अक्सर गर्ने वानी नभएकोमो बेलामा पनि हुनसक्छ ।
अहिलेसम्म निश्चित रूपमा थाह छैन हृदयाघात वा अस्थिर इन्जाइनाको भविष्यबाणी कहिले हुन्छ भनेर । तर, यिनीहरू धेरै वर्षको प्रक्रियाको परिणाम प्राय: हुन्छ । कोरोनरी आर्टरीहरूको काम रगत र अक्सिजन मुटुको मांसपेशीलाई आपूर्ति गर्नु हो । कोरोनरी मुटुरोग तब हुन्छ जब कोरोनरी आर्टरीहरूका भित्ताहरूमा विस्तार विस्तार चिल्लो जम्मा भइ साँघुरो बनाइन्छ । समयमा आर्टरी यति साँघुरो बन्छ कि यसले चाहिएको बेलामा मुटुको मांसपेसीमा अक्सिजनयुक्त रगत जस्तो व्यायाम गर्दामा पठाउन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा मुटुमा पिडा हुन्छ । यही दुखाइ या असजिलो हुनुको कारणलाई एन्जाइना भनिन्छ । यो अवस्थालाई आर्थलोसोर्लोशिस भनिन्छ र चिल्लो जम्मा भएकोलाइ आर्थोरोमा भनिन्छ ।
जव आर्थोरोमा अस्थिर बन्न पुग्छ, यो टुट्नसक्छ र रगत जम्ने (ब्लड क्लट) हुनसक्ने बनाउन सक्छ । यदि ब्लड क्लटले कोटोनरी आर्टरी बन्द गर्छ भने मुटुको मांसपेशी अक्सिजन र रगत नपाएर त्यसै रहन्छ र सधैको लागि नोक्सान हुन सक्छ । यसलाई हृदयाघात भनिन्छ । हृदयाघातको अवधिमा जीबन नै जोखिम हुन मुटुका रिदमहरुको विकास हुन सक्छ । त्यसैकारणले हृदयाघातलाई मेडिकल इमर्जेन्सीको रूपमा उपचार गरिन्छ ।
हृदयाघातको लक्षण छातीको बीच भागमा एकदम दुख्ने देखी छातीमा साधारण असुविधा हुन्छ जसले बिरामी जस्तो अनुभव गर्दछ । दुखाई चाहिँ एकदम गरुङ्गो या कसिंएको जुन दुखाइ पाखुरा, घाटी, गर्धन, पछाडि या भुडीमा पनि सर्न सक्दछ । घाटी, बंगारा, पाखुरा या भुडीमा मात्रै असर गर्न सक्छ । हृदयाघात भइरहेको मान्छेलाई पसिना आउने, टाउको हलुंगो हुने, वान्ता आउने या श्वास फेर्न गाह्रो हुने पनि हुन्छ । केही मान्छेहरू हृदयाघात हुँदा खाना अपच जस्तो ठानेर झुक्किन्छन् ।
कहिलेकाहिँ हृदयाघात ‘शान्त’ हुन्छ र यसले कम असुविधा महसुस हुन्छ । जस्तै कोही मान्छेहरूलाई छाती दुख्न यति कम हुन्छ कि डाक्टरकहाँ जाँदैनन् । अरू मेडिकल टेष्ट गर्दामा धेरै समय पछि थाह हुन सक्छ अथवा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा मात्र हृदयाघात भएको भन्ने पत्ता लाग्दछ ।
कसैलाई हृदयाघात भइरहेको छ भने तुरुन्त एम्बुलेन्स बोलाउनु या अस्पताल पुग्नुपर्दछ । धेरै मान्छेहरू एम्बुलेन्स बोलाउन कुर्दा या अस्पताल जान ढिलो गरेर जीवनलाई जोखिममा राख्दछन । यसर्थ सकेको चाडै अस्पताल पुग्नुपर्दछ यसले जीवन बचाउन सक्दछ ।
कार्डियाक यारेष्ट भनेको के हो ?
हृदयाघात भइरहँदा मुटुको रिदमलाई बाधा पार्न सक्छ । यसको गम्भीर रूपलाई भेन्ट्रीकुलर फिब्रिलेसन भनिन्छ । यो हुन्छ, जव मुटुको विद्युतीय गतिविधि यति अस्तव्यस्त हुन्छ कि मुटुले पम्प गर्न छोड्दछ र यसको सट्टामा काम्ने गर्छ । यसलाई कार्डियाक यारेष्ट भनिन्छ । यदि व्यक्तिलाई कार्डियाक यारेष्ट भएको छ भने उसले होस करिव एकैमा गुमाउँदछ । बाँचेको जस्तो कुनै लक्षण देखिंदैन । यो चाहि अत्यन्त जरुरी इमर्जेन्सीको अवस्था हो ।
कसैले सिपिआर (Cardiopulmouary resusciatation) तीन / चार मिनेटभित्र नगरेमा, उक्त व्यक्तिको दिमाग र अरू अंगहरू सदाको लागि नोक्सान हुन्छ । यो कहिलेकाहिँ छातीको भित्तामा ठूलो विद्युतीय झट्का द्वारा ठिक गर्न सकिन्छ, यसो गर्न प्रयोग गरिने मेशिनलाई डेफिब्लिएटर भनिन्छ । साधारण मुटुको धड्कन स्थापित गर्नलाई प्राय सफल हुन्छ र यसपछि मान्छेलाई कार्डियाक यारेष्ट नभएको जस्तै राम्रो हुन सक्छ ।
सिपिआर भनेको फोक्सोलाई फुलाउन मुखबाट मुखमा श्यास दिने जसले मुटुलाई पम्प गराउन बाहिरबाट छातीमा मालिस गर्ने गर्नुपर्छ । यसो गर्दा एम्बुलेन्स आउनुभन्दा पहिले श्वास प्रश्वास र रक्त सञ्चार चालु राख्नलाइ मद्दत गर्न सक्छ ।
ह्रदयाघात भएको एकिन भएमा साँघुरिएको आर्टरीलाई फराकिलो पार्न कोरोनरी एन्जियोप्लाष्टी या बाइपास, थ्रम्बोसिस जस्ता उपचारहरू हुनसक्छ । अरू परीक्षणहरू जस्तै एक्सरे, एको कार्डियोग्राम, ब्यायाम इसिजी, रेडियोन्क्युलीड स्क्यान, एमआराई आदि पनि गर्न सकिन्छ । यस्ता टेष्टहरु मार्फत मुटुले कति राम्रोसँग पम्प गरिरहेको छ र अरू उत्तम उपचार विधिको लागि निर्णय गर्न सहयोग पुर्याउँदछ ।
कसरी अरू कोरोनरी मुटुरोग लाग्ने जोखिमलाई कम गर्न सकिन्छ ?
कोरोनरी मुटुरोग रोकथाम गर्न सकिन्छ । यदि तपाईंलाई यसको जोखिमहरु जस्तै
धूमपान, उच्च रक्तचाप, उच्च रगत कोलेस्ट्रोल, शारीरिक निश्क्रियता, बढी वा धेरै वजन भएर, मधुमेह आदिको नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
हृदयाघात भएको छ भने पनि तपाईको मुटुलाई स्वस्थ राख्न र मुटुका अरू समस्याहरूको जोखिमलाई कम गर्न तपाईले धेरै कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईंको कोरोनरी मुटु रोग या मुटुको समस्याको कतिवटा जोखिमका तत्वहरू छन् र तिनीहरू कति धेरै छ भन्नेमा निर्भर गर्दछ । त्यसैले आफ्नो जोखिमका तत्वहरू थाह पाउनु राम्रो हुन्छ र तिनलाई नियन्त्रण गर्नलाई तपाईलाई सहयोग पुग्दछ ।
ह्रदयाघात भए तल भनिएका लक्षण देखिन्छ :
–	छाती एकदम दुख्ने, एकदम समातिएको जस्तो हुने र एकदम गहुगो हुनसक्छ
–	दुखाई छाती, घाँटी, पाखुरा, गर्धन, पछाडि भुडीमा हुनसक्छ
–	तपाईंलाई पसिना आउने, टाउको हलुगो हुने, बान्ता आउने र श्वास लिन गाह्रो हुन सक्छ
१)	जे काम गरिरहनु भएको छ, रोक्किने
२)	बस्ने र आराम गर्ने,
३)	यदि जिटीएन स्प्रे छ भने भनिएबमोजिम लिने । यति गर्दा १५ मिनेट भित्रमा पनि दुखाइ नरोकिएमा तुरुन्त एम्बुलेन्स बोलाउने अरू नकुर्ने ।
यदि जिटीएन स्प्रे छैन भने शान्त भएर १०/१५ मिनेट बस्ने र दुखाइ भइरहेमा तुरुन्त एम्बुलेन्स बोलाइहाल्ने ।
४)	यदि एस्पिरिनमा एलर्जी छैन भने पाइएको खण्डमा एस्पिरिन ट्याब्लेट ९३० चपाउने,	हृदयाघात भएमा तपाईंले दुईवटा महत्त्वपूर्ण काम गर्न सक्नुहुन्छ: ‘एम्बुलेन्स बोलाउने र आरामसँग बस्ने ।’ याद गरौँ समय महत्वपूर्ण हुनसक्छ ।
मुटुरोग र जीवनशैली सम्बन्धि न्यूनतम ज्ञान राख्ने, धुमपान त्याग्ने, क्रियाशील हुने, रक्तचाप, कोलेस्ट्रोल, रगतमा चिनीको मात्राको नम्बर थाह पाउने र त्यहि अनुरुप जीवनशैली बदल्ने, मधुमेहको नियन्त्रण गर्ने , मदिरा सेवन कम गर्ने, मोटोपन घटाउने, चिन्ताको ब्यबस्थापन गर्ने, परिवारमा मुटुरोगको इतिहास भएको व्यक्ति तथा माथि भनिएको जोखिमहरुलाई ध्यान दिई बर्षमा घटीमा एकपल्ट रगत जाच्ने र आफ्नो स्वास्थ्यको बारे जागरूप हुनुपर्छ ।
डाक्टरकहाँ जान संकोच नमानौ, मुटुरोगको कारणबाट अकालमा ज्यान जाने या यसबाट पिडित हुने क्रमबाट बचौं । स्व. विष्णुकुमारी बुढाथोकी तथा वहांको परिवारले भोग्नुपरेको क्षण कसैलाई पनि व्यहोर्न नपरोस । यसको लागि आफुले गर्नसक्ने कुरामा बिलम्ब नगरौ ।
(आचार्य कोरोनरी मुटुरोग -२०१० पुस्तकका लेखक तथा नेप्लिज हार्ट फाउन्डेसन बेलायतका अध्यक्ष हुन्)